Xafiiska Dhalinyarada Hoy La'aanta ah - Caawinta Farsamada - Waaxda Ganacsiga Gobolka Washington
Bogga ugu weyn|U adeegida Bulshooyinka|Caawinta Guri La'aanta|Xafiiska Dhalinyarada Hoy La'aanta ah|Xafiiska Dhalinyarada Hoy La'aanta ah - Caawinta Farsamada
Si loo caddeeyo iyo caawimaad farsamo oo ku saabsan xogta, barnaamijyada iyo shaqadeena Xafiiska Dhalinyarada Guri-laaweyaasha ah ee loogu talagalay deeq-bixiyeyaasha iyo dadweynaha.
Tilmaamaha Barnaamijka Dhalinyarada Guri La'aanta ah
Barnaamijyada Daryeelka Kooxda ee shatiyeysan
Xarumaha RAJADA, Xarumaha Degenaanshaha Dhibaatooyinka iyo Sug Xarumaha Degenaanshaha Dhibaatooyinka siiyaan deg-deg, deggenaansho ku-meel-gaar ah, qiimeyn, gudbin, dib-u-heshiisiin qoys iyo adeegyo qorsheynta joogtada ah ee dhallinyarada (da'doodu tahay 12-17) ee khilaafsan qoyskooda, ka cararay guriga, ama caafimaadkooda iyo ammaankoodu halis ku jiro.
Barnaamijyada Nolosha Ku -meelgaarka ah (mashruuc tijaabo ah) siiyaan guriyeyn muddo dheer ah, qiimeyn, gudbin, ku-biirinta qoyska ee joogtada ah iyo adeegyada qorsheynta joogtada ah ee dhallinyarada aan ku tiirsanayn dawladda (da'aha 16-17).
Adeegyada Daaweynta Ka-hortagga wuxuu siiyaa adeegyo caafimaad hab -dhaqanka dhallinyarada u -qalanta ee ku dhex jira HOPE, CRC iyo hoy dhallinyaro oo ruqsad haysta habeenkii.
Soo dejiso Tilmaamaha Barnaamijyada Daryeelka Kooxda Ruqsadaysan (PDF)
Barnaamijyada Guriyeynta Dadka Waaweyn siiyaan kaalmo kiro, guri ku-meelgaar ah, iyo maareynta kiiska dhallinyarada qaangaarka ah ee u-qalma (da'da 18-24).
Barnaamijyada Guriyeynta Dhalinyarada ee Madaxa Bannaan siiyaan kaalmo kiro, guri ku-meelgaar ah iyo maareynta kiiska dhallinyarada qaangaarka ah ee u-qalma (da'aha 18-23) ee ka soo baxay gobolka ama nidaamka daryeelka korinta qabiilka ee federaalku aqoonsan yahay, waxay ku tiirsanaayeen gobolka muddadii afarta bilood ahayd ee ka horreysay 18-kiith dhalashada, iyo buuxinta u -qalmitaanka dakhliga.
Soo dejiso Tilmaamaha Barnaamijyada Guriyeynta (PDF)
Barnaamijyada Wacyi -gelinta
Adeegyada Wacitaanka Waddooyinka wuxuu siiyaa wacyigelinta dariiqa iyo bulshada ku saleysan adeegyada loogu talagalay dhalinyarada dariiqa (da'da 12-18) iyo dhalinyarada qaangaarka ah ee aan lala socon (da'da 18-24). Adeegyada sida ka-hortagga dhibaatooyinka, sahayda degdegga ah iyo hoyga, daryeelka caafimaadka, la-talinta, ka-hortagga iyo hawlaha waxbarashada, dhisidda xirfadda shaqaalaynta, u-doodidda iyo taageerada dabagalka ayaa si toos ah loo bixiyaa ama iyada oo loo sii gudbiyo.
Barnaamijka Hoyga Dadka Waaweyn waxay siisaa deg-deg, hoy ku-meelgaar ah, qiimayn, gudbinta iyo adeegyada qorshaynta joogtada ah ee dhalinyarada qaangaarka ah ee jira 18-24.
Soo degso Tilmaamaha Barnaamijyada Wacyigelinta (PDF)
Tilmaamaha Barnaamijka iyo Khayraadka
Webinars iyo Documents
Barnaamijyada Xarunta 'Hope Center' iyo Xarumaha Degenaanshaha Dhibaatada Webinar
HOPE Center iyo Crisis Residential Center (CRC) barnaamijyadu waxay si ku meel gaar ah u siiyaan dhalinyarada guri la’aanta ah ee da’doodu u dhexeyso 12 ilaa 17.
Qeybta Kheyraadka Shatiga, DSHS
Xafiiska Dhalinyarada Hoyla'aanta ah, Waaxda Ganacsiga
Adeeg bixiyaha hadda HOPE / CRC
Duubista webinar oo lagu daray dhammaan qoraalada la xiriira iyo dukumiintiyada ayaa laga heli karaa halkan.
Webinar Wadada Wadada:
Barnaamijyada SYS waxay fidiyaan wacyigelin si ay uga qaybqaataan dhalinyarada baxsadka ah iyo hooy la'aanta adeegyada ay ka midka yihiin hoyga, guryaha, iyo maaraynta kiisaska. Webinar-kaan waxaa loogu talagalay deeq-bixiyeyaasha SYS ee hadda jira ama kuwa mustaqbalka ah inay si fiican u fahmaan baaxadda adeegyada SYS, tilmaamaha barnaamijka, iyo dhaqannada ugu fiican. Webinar-ka waxaa la duubay 16-kii Maajo, 2018 waxaana ka mid ah ka-qaybgalayaasha hadda iyo kuwii hore ee SYS!
Halkan guji si aad udhageysato duubista webinar oo u aragto bogagga PowerPoint.
Xafiiska Dhallinta Hoylaawayaasha ah wuxuu siiyaa hagitaankan soo socda Isu-duwaha Isku-darka (CE's) ee ku saabsan borotokoollada lagu qiimeynayo, mudnaanta la siinayo, iyo u soo gudbinta dhallinyarada guri la'aanta ah (ka yar 18) iyo dhallinyarada qaangaarka ah (18-24) ilaha guryaha: Shan talo-bixin ah oo ku saabsan sameynta isku-duwaha isku-dhafan ee loogu talagalay dhalinyarada guri-laaweyaasha ah iyo dhalinyarada waaweyn.Tilmaantaani waxay qalab u tahay bixiyeyaasha CE iyo kuwa darbi-jiifka ah maadaama ay si wada jir ah uga shaqeynayaan si loo hubiyo in agabyada guryuhu ay heli karaan dhalinyaradaas hoy la'aanta ah iyo dhalinyarada waaweyn ee aadka ugu baahan.
Tilmaamaha HUD Noocyada Guri La'aanta